Ny tetibola Rosiana Pobeda Airlines dia manohy ny sidina ao Moskoa-Milan
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny tetibola Rosiana Pobeda Airlines dia manohy ny sidina ao Moskoa-Milan
Pobeda dia mamerina ny sidina mankany Milan (Bergamo). Ny sidina Moskoa-Milan (Bergamo) dia hotanterahina manomboka ny 26 martsa 2021 amin'ny zoma
Pobeda hanohy ny sidina mankany Milan Bergamo amin'ny volana martsa
Ny sidina Moskoa-Milan dia hotanterahina amin'ny zoma
Pobeda dia nanao fanambarana tamin'ny alàlan'ny mailaka nalefany ho an'ny mpandeha
Rosiana mpitatitra rivotra Rosiana Pobeda (Fandresena) dia nanambara fa hamerina ny serivisy serivisy ho an'ny Milan-Bergamo any Italia manomboka ny 26 martsa, hoy ny zotram-piaramanidina tao amin'ny mailaka nalefany tamin'ny mpanjifa.
“Manohy ny sidina mankany Milan (Bergamo) i Pobeda. Ny sidina Moskoa-Milan (Bergamo) dia hotanterahina manomboka ny 26 martsa 2021 amin'ny zoma ”, hoy ny orinasa.
Ny sidina mahazatra eo anelanelan'ny Rosia sy Italia dia naato tao anatin'ny areti-mifindra coronavirus.
Mandritra izany fotoana izany, ny mpitatitra dia afaka manao sidina mpitondra entana sy mpandeha, misy vondron'olona sasany ihany no afaka mividy tapakila ho azy ireo.
Raha any Italia, ny mponina italianina, ny rosiana manana fahazoan-dàlana hipetraka ao amin'ny EU, ny mpitsabo manana fahaizana ambony, ny mpianatra, ny mpanampy diplomaty, na ny olona mangataka fanampiana ara-pahasalamana dia mety hiditra ao amin'ny firenena izao.